Ngabe i-Android izoba irobhothi elincane elizophumelela empini yethu? | Kusuka kuLinux
Ngabe i-Android izoba irobhothi elincane elizophumelela empini yethu?
Ekuqaleni kwenyanga edlule a isihloko en TechCrunch, kuvezwe imininingwane ekhishwe yinkampani yodumo yokuhlaziya I-IDC, kukhombisa izibalo zokuthengiswa kwamadivayisi eselula ekupheleni kwekota yesithathu ka-3, ngokusho kohlelo lokusebenza, imininingwane ebithathe izindawo e- abanye izindawo eziningi. Kungenzeka ukuthi abanye sebevele bekwazi, kepha ngikukhombisa izibalo okukhulunywa ngazo ngezansi:
Kuyamangalisa, akunjalo, kunjalo futhi uma ngikutshela ukuthi eminyakeni emihlanu nje vo ngemuva kokumenyezelwa kwayo ngokusemthethweni, i-Android ikwazile ukuthengisa ezinyangeni ezi-5 ezedlule inani elifanayo lamadivayisi njengoba inani eliphelele elathengiswa ngo-3, manje, cha Lokhu yikho kanye engifuna ukukuhlanganyela, uma kungenjalo okuyiyona nto ebaluleke kakhulu, ngombono wami, yalesi simo nokuthambekela kwaso okubonakalayo kokuqhubeka.
Akuyona imfihlo kunoma ngubani ukuthi i-computing yamanje iyiselula, okungukuthi, njengomthetho ojwayelekile, amadivayisi eselula (ama-smartphones namathebulethi) asetshenziswa kakhulu, womabili ukwenza imisebenzi yansuku zonke (ukufunda nokuphendula ama-imeyili, ukuphequlula iwebhu, njll. ), kanye nokwenza izicelo zebhizinisi (ukukhishwa kwezicelo nemibiko yokuthengisa, njll), kulokhu kufanele sengeze ukuthi ukwanda okukhulu kakhulu kwabasebenzisi bezobuchwepheshe be-IT kanye nenethiwekhi kubhalisiwe emazweni okuthiwa asafufusa (India, I-Afrika, i-Southeast Asia, njll.), Lapho iningi labasebenzisi abasha lifinyelela khona okokuqala ngakwenye yalezi zinsiza, umkhuba obonakala uqiniswa ngokuzayo nalapho zikala khona izithembiso ezibalulekile.
Manje-ke, ngokwami ​​ukubona, sithini lesi simo? Yebo, kuzodala ukuthi ngokuzayo kwenzeke nge-Android ngokufana neWindows ngesikhathi sokuvela nokusakazwa kwama-PC. Yima isikhashana Ake sicabange, kungani iWindows isakwazi ukugcina inani elikhulu kangaka labasebenzisi? Ilula, ngoba iyilokho abakwaziyo, futhi sibuyela kuluphu olungenamkhawulo "oluza ngokujwayelekile" kumakhompyutha futhi yingakho belusebenzisa futhi ngokufanayo. Kepha manje iningi labasebenzisi abasha abajwayelani neWindows noma omunye umkhiqizo weMicrosoft "kubhapathizo" lwabo kepha nge-Android, ngaphezu kweqiniso lokuthi ingxenye enhle yabasebenzisi "abadala" nayo izuza amadivayisi we-Android.
Futhi bazothi, "Awu, manje?" Awu, akukho lutho, kulula kakhulu, ukuthi ukuze baqale ukusebenzisa olunye uhlobo lwedivayisi (izincwadi zokubhalela, ama-PC, njll.) Ngokususelwa kupulatifomu eyabelana ngomongo ofanayo, njengoba kwenzeka nge Noma iyiphi i-distro ye-GNU / Linux kufanele ibe lula ngokwedlulele, ngoba imidwebo yomsebenzisi iyafana, izinhlelo eziningi ziyaphatheka phakathi kwamadivayisi, njll., Lapho kufanele kungezwe ukuthi ukudluliswa kolwazi ku-ecosystem of amadivayisi anezinhlelo zokusebenza zalolu hlobo ayamanzi futhi kulula ukuwasebenzisa.
Kungenzeka ukuthi lokho okufeziwe ngemizamo "yokuvangela" yomphakathi wabasebenzisi bobuchwepheshe obuvulekile, kuzodlulwa kabanzi yilokho okutholwa yirobhothi elincane okuzohlala lapha, awucabangi?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ngabe i-Android izoba irobhothi elincane elizophumelela empini yethu?
I-Android ngokungangabazeki iyimpumelelo. Kepha i-Android yiLinux kuphela, ingxenye ye-GNU ishiywe ngaphandle. Noma kunjalo ngiyikhetha izikhathi eziyinkulungwane ku-iOS neWindows Phone.
Kuyathakazelisa ukuthi babeka iLinux njengento ehlukaniswe ngokuphelele, njengokungathi yi-OS "yabambalwa" hehe. Angiqondi ukuthi kungani lokhu kunjalo, kufanele babeke iLinux (Android) neLinux (Abanye) ukuze icaciswe. Kepha yebo, i-Android izoyinqoba le mpi.
Njengoba nje igama elithi "GNU / Linux" laqanjwa, igama elithi "Android / Linux" kufanele lisetshenziswe.
Ngicabanga ukuthi kufanele kube kanjena, i-Android imaka ngaphambi nangemva kokuba ngicabanga ukuthi ngisebenzisa i-Linux njengesisekelo ..
Nge-android yami imele ifilosofi ye-google hhayi leyo ye-linux.
Izinhlelo zokusebenza ze-Android kumele zenziwe zisebenzisane ngokuphelele ne-GNU / Linux. Lapho sizoyinqoba impi kabili. Ngangifundile ukuthi isithiyo esikhulu uhlelo lwewindi le-X. Mhlawumbe ukuhambisana kweWayland kulula ukukufeza, angazi.
Kubonakala kimi ukuthi isithiyo esikhulu sivaliwe futhi asiyona imigqa yehadiwe ... Yebo, kubakhiqizi be-smartphone ibhizinisi ukuthengisa amayunithi amaningi, ukube bekulula ukwengeza ukusebenza okusha ngesoftware yesitayela se-PC, bekungeke kube khona eziningi kakhulu ezizophuma zithole i-smartphone entsha kumodeli ngayinye entsha yethulwe emakethe, njengoba kwenzeka nge-Apple iPhones ekhawulelwe ngokuhlekisa kuzo zombili isoftware nehadiwe, ukuze kube nezindaba ekwethulweni kwalezi zinhlobo ezilandelayo.
Kepha lokho akuhlangene nakancane nengikushilo. Akudingeki ukuthi sazi i-hardware ukuthola izinhlelo zokusebenza ze-Android ezizoqalisa ku-GNU / Linux. Ngicabanga ukuthi kulokhu engikushoyo, okudingekayo kuvulekile kakhulu futhi kuyatholakala.
Hawu! Angikuqondanga kahle obukusho ... bengicabanga ukuthi ubhekisa ekusebenziseni izinhlelo ze-Android kuselula ene-GNU / Linux njengohlelo lokusebenza.
iván Barra kusho
Ngibe ngumsebenzisi we-Android iminyaka embalwa manje, kusukela "IDonut", yavela ku-Symbian; uqobo luyangikhonza kakhulu, futhi bengilokhu ngilandela ukuthuthuka kwayo ngentshisekelo, kepha, naphezu kwakho konke, inqobo nje uma injini yayo iyiJava, ukukhula kwayo kuvinjiwe, kufanele ushintshe injini yakho kube yinto epholile nengaphansi kakhulu, lapho siyabona ukuthi izicelo zindiza ngehadiwe yamanje, lapho ngibona khona ukuthi ukuba nezinhlamvu ezi-4, akunandaba. Akusekho iJava eyenziwe ngekhono ku-Android, yebo kunjini entsha
Phendula iIván Barra
Kuyaqondakala impela ukuthi, uma i-smart ilethe i-hardware esebenza njengomshini obonakalayo we-Java (okungukuthi, umshini obonakalayo we-Java akuyona nje isoftware, kepha kukhona ucezu lwehadiwe ngqo lokhu) khona-ke izinhlelo zeJava bezizobenza " Ngokwesihluku ", nezaba zokuthi iJava ihamba kancane nokuthi ezinye izilimi zingcono ngeke zisasebenza, futhi yini engikwaziyo, la mazwana angitshelwe nguprofesa eyunivesithi, we-elekthronikhi, ukungazi okuyisiphukuphuku, bekungeke kwenzeke kimi haha
Uthanda noma ungathandi, uthande kakhulu noma ngaphansi, uqinisile impela emhlabeni. Mhlawumbe leyo "mpi" ebilokhu izama ukunwaya isabelo sokusetshenziswa kweWindows yiLinux ivela esandleni sesinye isigebenga njengeGoogle. Imvamisa kwenzeka ukuthi abantu abaningi ababambeki kulokho okukhona kepha bazama ukuhlaziya nokuqhubekela phambili kuleyo ndlela futhi ngeLinux nakuLinux kuningi ongakuthola futhi okuluhlaza okotshani nokukhuluphele kungasinika ukucindezela kokugcina. Ukubingelela.
Usuku okuthengiswa ngalo umakhalekhukhwini, engingafaka kulo i-Debian ngaphandle kwezinkinga, noma olunye uhlelo lokusebenza lwamahhala, futhi ngasikhathi sinye ngikwazi ukusebenzisa wonke amandla wehadiwe kanye nesoftware kusuka kudeskithophu yami ye-KDE (noma noma yini ufuna…). Ngalolo suku ngizocabanga ukuthenga enye yalezo Smartphones.
Ngicabanga ukuthi kulezi zinsuku amandla ama-smartphones anele (ama-processor amahle, ihluzo ezinhle -izombili ekuxazululeni isikrini ne-2d ne-3d acceleration-, kanye nokuxhumana okuhle), ukusebenzisa i-GNU / Linux distro (noma enye ideskithophu yesistimu yokusebenza yendabuko). Kepha kulezi zinsuku kulolu hlobo lwedivayisi awuboni okujwayelekile njengakuma-PC okwenza izinto zibe lula ukufaka i-distro nokuthi konke kusebenza njengakwi-PC yedeskithophu, ngaphezu kokuthi izinto eziningi zehadiwe zivaliwe hhayi ukuthi zinamahhala abashayeli ...
Iqiniso ukuthi ngokungangabazeki i-Android izuze isabelo esiningi semakethe futhi lokho kukhona okukhona. Noma kunjalo, ungadideki. Abantu basebenzisa i-Android kulokho okuqokonyiswa umbhali, yingakho aqala ukusebenzisa iWindows. Yilokho okuza kumadivayisi abo futhi abakucabangi ukukushintsha. Ngeqiniso angiboni ukuthi i-Android ingakusiza ukusetshenziswa kwe-GNU / Linux kuma-PC wedeskithophu. Abantu bamane basebenzise abakusebenzisayo ngoba yilokho okuza ngokujwayelekile kumagajethi abo.
Kusobala ukuthi kithina i-Android izoba yi-linux, ngaphandle kokungabaza, kepha abantu abaningi abasebenzisa i-PC, ithebhulethi, noma iselula abazi nokuthi i-Operating System iyini, ngoba abanantshisekelo yokuyazi.
Kungumqondo wami othobekile, kepha i-Android yilokho okujwayelekile kumafoni namathebulethi amaningi, futhi abantu abanandaba nokuthi ngemuva kune-software yamahhala noma ukuthi kune- "Android" yama-PC abo. Angiboni ukusebenzisana phakathi kwazo zombili izinhlelo zokusebenza, kalula
I-Android isincintisana esisodwa seGNU / Linux. Kuyisimo semvelo esikhethekile (noma ngabe siyisistimu yemithombo evulekile), ene-SDK yayo, i-GUI yayo, ama-APK ayo, ... Uma ngolunye usuku ihambisana ne-GNU / Linux kuzoba umlingani omuhle kakhulu (imidlalo / izinhlelo zokusebenza ziyahambisana kuzo zombili izinkomba). Okwamanje okuwukuphela kwento enhle ukuthi uhlelo lwe-Linux kernel luthinta iMicrosoft ne-Apple (ababusi bomthombo ovaliwe).
UMiguel: «Okwe-android yami imele ifilosofi ye-google hhayi leyo ye-linux».
Angithembi lutho oluvela kuGoogle kimi, bahlala benentshisekelo efihliwe. Zimbi ukwedlula iMicrosoft neApple okungenani ezihamba ziye ekhanda.
Ngokusobala, i-Android iwina ngokuningi. Manje, ukulunga, kunezinto ezimbili okufanele uzicabangele.
1. I-Android iyatholakala kalula (futhi uma ifinyeleleka, akusho ukuthi "ishibhile").
2. I-Android inezinkampani eziningi ezakha futhi zenze amadivayisi asebenzisa i-Android kunanoma iyiphi enye i-OS ephathekayo.
Ngalokhu ngiqonde ukuthi ngenkathi i-Android ingaba nezingu-10 (zingaba ngaphezulu noma ngaphansi, kuyisibonelo nje) izinkampani ezisebenzisa le OS ukwenza imishini nokuthengisa imikhiqizo yazo, i-Apple, iMicrosoft nabanye bane "allies" ezimbalwa leyo ndawo. Ngalesi sizathu, ngikuthola kungalungile ukuthi lawa madivayisi aqhathaniswa nokuthi "ngubani othengise okuningi" noma "bangaki abasebenzisi abane-Android uma kuqhathaniswa nezinye izinhlelo", ngoba ngenkathi sinezinkampani eziyishumi ezisebenzisa i-Android ezithengisa amadivayisi wazo, mhlawumbe wena unezimbili noma ezintathu kuphela ezenza i-iOS, iWindows noma ezinye. Ngokusobala, uma nginomkhiqizo futhi ngithemba umenzi oyedwa ukukwenza futhi, mhlawumbe, omunye umuntu unomkhiqizo ofanayo kepha unabakhiqizi abaningi abangabasiza, labo bakhiqizi bazonikezwa umsebenzi wokwenza izinto eziyiqiniso izimbangi zami noma zabo bonke labo abadala imikhiqizo efanayo futhi bazoba nethuba elikhulu. Okuthile okufana nalokho okwenziwe yiCanonical nge-OS yayo. ICanonical yinkampani enkulu, inabalingani ezindaweni ezahlukahlukene, futhi yize kwabanye kukhona ama-OS angcono kune-Ubuntu, aqhubeka nokugqama ngoba, ngokulula nangokulula nje, anezinsizakusebenza eziningi kunamanye ama-OS anamandla amahle kakhulu ; Yize kwezinye izindawo zingcono kakhulu kune-Ubuntu, Ubuntu bunenzuzo enkulu endaweni yezentengiso.
Vele ngiyaluthanda uhlelo lwamahhala kepha angicabangi ukuthi uGoogle wenze noma uyaqhubeka nokwenza umsebenzi omuhle ezinhlelweni zabo uma kukhulunywa ngenkululeko. Ngokwami ​​ngithanda i-iOS, yize kuleli sonto eledlule bengizothenga i-Galaxy Nexus entsha.
Ngethemba ukuthi i-Android iyaqhubeka nokulawula imakethe ye-smartphone, ngokwami ​​ngine-Samsung Galaxy futhi iqiniso lihle kakhulu, ngingaphezu kwe-iOS nangaphezulu kwefoni yeWindows. Akunandaba ukuthi kuvela kwaGoogle, inhliziyo yayo yiLinux XD
Iqiniso ukuthi lapho ngikwazi ukufaka i-Debian ocingweni, ngalolo suku ngizojabula 😀
Izindaba ezinhle 🙂 Ngicabanga ukuthi kukhona i-distro engavula indlela yabanye abafowabo endaweni yonke ye-smartphone futhi ibizwa nge-Ubuntu. Uma i-distro ikwazi ukuvula isikhala ku-Android ngokuqinisekile abaningi abaningi bazokwenza kamuva 🙂
Ngibona kunzima ukuthi ama-distros afana noDebian, Arch Linux noma uFedora angakufinyelela lokhu esikhathini esifushane, kepha ngiyaqiniseka ukuthi ngolunye usuku lokhu kuzokwenzeka ... Okwamanje ukuphela kwento engayenza Ubuntu, iphrojekthi isivele isendleleni futhi isiqalile ukunikeza imiphumela kungenzeka ukufaka ubuntu kuNexsus nakwamanye amadivayisi eselula futhi, Lapha ngabelana ngesixhumanisi ngolwazi olumayelana nephrojekthi, ungathola imininingwane eminingi kwi-inthanethi
Uma i-Android iwine impi ngathi !!! futhi ubuntu (yize abaningi beyizonda, ngokwami ​​ngiyayithanda) kuzoba yingxenye ebalulekile yalokhu kuthuthuka okubalulekile be futhi kuzokhunjulwa kuze kube nini nanini njenge-distro yokuqala eyanqotshwa yi-android. Amen…!
Yebo, Ubuntu njenge-distro banezinkinga eziningi, abalandeli abaningi kanye nabaphikisi abaningi, kepha iCanonical izuze ngesikhathi "esifushane" lokho amanye ama-distros angazange akuthole kokuningi.
Empeleni lapha sichaza ukuthi le Ubuntu + Android ibikhuluma ngani 😀 - » https://blog.desdelinux.net/ubuntu-android-de-que-va-esto/
Bengilokhu ngiza emhlabeni we-Linux, futhi iqiniso ukuthi, amanye amapulatifomu amabili ancintisanayo (i-iOS ne-WinPhone 8), angikaze ngikwazi ukuwahlola. mhlawumbe ngoba isuselwe kwiLinux, ngihlala ngibona i-Android njengethuba elihle, futhi bengilinde ukunqoba kwayo kwamanye amapulatifomu. kodwa emasontweni ambalwa engibe ngumsebenzisi, ngiyaneliseka ngezinga elithile. Ngicabanga ukuthi okungikhathaza kakhulu ukuvuselelwa kohlelo, futhi lokhu ngikubonisa ngesibonelo: i-Xperia yami yethulwe kulo nyaka, futhi ngenyanga edlule, u-Sony umemezele ukuthi ngeke ayithole i-Jelly Bean, yize i-hardware yayo iyafana nakwabanye abazoyithola. Yize kuliqiniso ukuthi kukhona ama-roms, angikuboni kulungile ukuthi kufanele ngizinikele kulokhu. uma ngibheka ngaphesheya komgwaqo, ngithola ukuthi i-iPhone 3GS, izokwamukela noma ithole i-iOS 5, ihadiwe eyakhishwa ngo-2009 isasebenza futhi ithole ukwesekwa iminyaka emithathu, yize ingaqhathanisi nabalandela ezobuchwepheshe izici. Ngakolunye uhlangothi, okwami, okusanda kuthengwa, sekuvele kudingisiwe. Bengilokhu ngigxeka kakhulu i-Apple kwezinye izici futhi lapha bayayazi, kepha kuyacaca kimi ukuthi iGoogle ayinandaba nabasebenzisi. Angisho ukuthi i-Apple ayenzi ngendlela efanayo, kepha ngicabanga ukuthi okuncane, lokhu okusobala kusobala ngokwenhloso yalo, noma ngabe kukubi.
Kepha angicabangi ukuthi yiGoogle ekhawulela izibuyekezo, ngumkhiqizi. Ngokusobala, benza imishini yabo ukuze ingahambelani nezibuyekezo ezizayo zokukugcina uthenga imikhiqizo emisha. Ngokuphambene nalokho, i-Galaxy Nexus (ifoni yakwa-Google) ayigcini lapho. Njengoba i-OS noma ukuvuselelwa okuningi kuvela okusha ungakwenza ngaleyo mishini. Noma kunini lapho ngicabanga ngokushintshela ku-Android ngikwenze ngenhloso yokubheka amaqembu e-Google ngaleso sizathu.
okushoyo kuyiqiniso, kodwa futhi kuyiqiniso ukuthi iGoogle ayinandaba nokuqhekeka. Ubufakazi busezitatimendeni zakamuva ngelinye lamalungu eqembu le-Android elicele abakhiqizi ukuthi baqhubeke nokuguqula i-Android kuzingxenyekazi zabo. Ngokuqondene namadivayisi we-Nexus, kuyiqiniso futhi ukuthi ukuphela kwendlela yokuhambisana ne-Android. futhi yebo, ibhizinisi. Uma bexhasa wonke amadivayisi, abasebenzisi abaningi bebengeke bathenge imikhiqizo emisha, kepha kuyadumaza kancane. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule bengingenandaba, ngoba ngineNokia 5800 enepulatifomu efile, kepha manje njengoba ngiku-Android, bengizolinda isikhashana.
Nginesithuthuthu esiphikisayo esinqunywe yi-Motorola esisesimweni esiphezulu ngokuya ngama-roms aphekiwe, kepha kuyikho, imboni ifuna ukuthengisa kangcono kakhulu.
Ngiyaxolisa ngokuphendula imibono ngendlela efingqiwe hhayi ngawodwana, njengoba kufanele kube njalo, kepha ubunzima bokuxhuma kwami ​​bungiphoqa kulokhu, hhayi ngenxa yalesi sizathu ngiyeka ukunaka omunye nomunye wenu. Hhayi-ke manje kulokhu okusikhathazayo.
@Blaire Pascal: Angiqondi nhlobo lokho kuhlukaniswa, bengifuna imininingwane engaphezulu kepha angitholanga lutho oluchaza ukuthi babesuselwe kuphi ukuhlukanisa.
@adrian: Uqinisile ukuthi i-Hardware ivaliwe futhi ayifakwanga indinganiso, eyokuqala inzima kakhulu, angicabangi ukuthi ubukhona be-hardware evulekile ngendlela efanayo ne-open-software kungenzeka, okungenani nge-short or medium Ithemu Ngokuya ngokungajwayelekile, ngikubona njengenzuzo ngoba bheka ukuthi zingaki izingxenyekazi zehardware ezisebenzisa i-Android, okunikela ekusakazekeni kwayo; Izibalo ziyakubonisa.
@Raul: Ngiyavumelana nawe.
@ ilván Barra: Ngicabanga okufanayo, kuze kube yilapho iJava isuswa, amandla aphelele ale nkundla ngeke axhashazwe.
@adrian: Uma wenza usesho lakwaGoogle nge "ubuntu + install + tablet" uzobona ukuthi kungenzeka ukufaka amanye ama-distros kuthebhulethi, kwenzeka okufanayo uma usesha i- "ubuntu + install + smartphone"; Manje, ukuthi kungenzeka akusho ukuthi kulula futhi kulula njengoba sifuna, kulungile; Lokho ngeke kwenziwe kunoma iyiphi idivaysi uma kungenjalo kuphela kumamodeli athile, kungenzeka futhi, kepha kufanele uqale ngokuthile, uma ukhumbula, i-GNU / Linux iqale ngokufanayo, inabashayeli abambalwa ngakho-ke, kunamakhompyutha ambalwa lapho iqale khona futhi yabukeka ukuthi zinjani izinto namuhla.
@Tesla: Ngumqondo oyinhloko wokuthunyelwe; Abasebenzisi abaningi bakuthola kusobala uma kuyi-Android noma iWindows noma enye i-OS eza kudivayisi yabo, futhi ngeke bazikhathaze ngokuthola futhi leyo yimininingwane engasiza, ngoba uma bebeka incwajana noma i-PC ene-interface "ujwayelekile" kuwe, bazoyisebenzisa, ngaphandle kokuzibuza ukuthi ngabe yiWindows noma cha, kuyabasebenzela nje, period.
@ Windóusico: Ngokwami ​​angiqondi ukuthi kungani usikisela ukuthi kube »okukhethekile", kodwa okungenani siyavumelana ekuphethweni kokuphawula kwakho: «... ukuthi uhlelo olune-kernel ye-Linux luthinta amakhala kaMicrosoft ne-Apple ..."
@platonov: Ngiyethemba awusebenzisi noma yiziphi izinsizakalo ze-Google, ngisho nenjini yabo yokusesha.
@Darko: Okushoyo nge-Canonical kuvumelekile, engingangeza ngakho ukuthi ngubani osesikhundleni esihle sokufinyelela izivumelwano nabakhiqizi behadiwe ukuze amaqembu abo aphume ne-distro ye-GNU / Linux. Maqondana nalokho okuphakamisayo nge-Google, angivumelani nawe, okungenani okwesikhashana engakukhombisi.
@Adoniz (@ NinjaUrbano1): Uma ungena http://www.htcmania.com Uzothola ukuthi uma kungenziwa kwamanye amaqembu, mhlawumbe unenhlanhla kanti owakho ungomunye wabo, hlanya uzame bese usitshela konke.
@ heero_yuy91: Ngiyavumelana nombono wakho, ngiyaqiniseka ukuthi ngokuzayo sizobona ama-distros asekelwa kakhulu.
@elendilnarsil: Ngivumelana nempendulo kaDarko osebenza naye ekuphawuleni kwakho, inkinga akuyona i-Android (noma iGoogle), ngabakhiqizi bamatheminali abakhawulela ukubuyekeza. Mayelana neGoogle ekhuthaza ukuthi abakhiqizi bashintshe i-Android ngokuya ngezidingo zabo, nginombono wokuthi, kunokuba kube yingozi, kulungile ngoba ukwehluka kunikeza izinketho eziningi nezindlela zentuthuko.
@vinsukarma: Njengoba usho; "Ingabe kukhona okukhona", okungenani lapha sinezinketho eziningi ngenxa yesikhathi nethalente abantu abaningi abazinikezela kuma "ROMs" okupheka bese bewenza atholakale kuwo wonke umuntu, lokho kungenye yezinzuzo zohlelo nge-GNU / I-Linux ku-DNA yakho.
Futhi, ngiyabonga nonke ngemibono yenu nangokudlula lapha.
Kukhethekile ngoba labo bakwaGoogle bazisungulele ibha yolwandle. I-GNU / Linux ne-Android ngamazwe amabili ahlukene. Abasungulanga ubudlelwano bohlobo lwe-OSX / iOS, abanikeli ngalutho ngokusetshenziswa kweLinux kwi-PC futhi bagweme igama elithi Linux lapho bechaza i-Android. I-Android ibulala ezinye izinhlelo ezenzelwe i-Linux, ngingathanda okuthile okufana neMaemo ukuze ngiphumelele izikhathi eziyinkulungwane (kepha nge-Qt nePlasma Active :-P) eningi.
Inkinga ngabakhiqizi abaguqula i-android ngendlela abayithandayo ukuthi ishiya amadivayisi kungekudala, ngoba akubona bonke abakhiqizi ababuyekeza imishini yabo, njengakwami. Ekugcineni, njengoba beseshilo lapha, kuphela nge-Nexus ungabuyekezwa isikhathi eside.
Nge-Android yami iguqule impilo yami, ngaya kwiLinux, bengilokhu ngiyibona njengesixakaxaka. Manje ngine-3 Android (i-Xperia play, i-Nikon coolpix ne-tabket), futhi ngiyisebenzisa ngaphezu kwe-Windows PC yami.
Ngicabanga ukuthi iGoogle ingemuva kwayo inika umsebenzisi ukuzethemba.
Amaphephadonga angama-23 amahle kakhulu ngeFedora